Sheikh Shariif oo Soomaalida ugu baaqay in ay ka faa?iidaystaan horumarka ka socda dalka – Radio Daljir
Sheikh Shariif oo Soomaalida ugu baaqay in ay ka faa?iidaystaan horumarka ka socda dalka
Oktoobar 17, 2013 3:21 b 0
Kampala, October 17, 2013 – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya shariif sheekh Axamed ayaa dadweynaha Soomaaliyeed ugu baaqay in ay is cafiyaan, maadama haatan ay muuqato soo kabasho 22 sano oo burbur ah kadib.
Shariif sheikh Axmed oo dadweyne Soomaaliyeed kula hadlayey magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa sheegay in ay mar kasta muhiim tahay in la isu calool fiyoobaado, ?bishan Ciidul Adxaa waxay leedahay faa?iidoyin badan sidaas darteed ha la is cafiyo.?
Madaxweyne Shariif waxaa uu sheegay in haatan Soomaaliya ka muuqdaan horumaro kala duwan oo dalka ka jira, waxaa uu ugu baaqay bulshada Soomaalida ee dibeda degan iyo kuwa gudaha intaba in ay ka faa?iidaystaan jidadka u furan.
?Shacabka Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul iyo dowlad wanaagsan, horumar iyo barwaaqo iyo in la is cafiyo.? Ayuu yiri shariif sheikh Axmed oo dadka kula hadlayey magaalada Kampala ee xaruunta dalka Uganda.
Madaxweynihii hore ee dowladdii KMG ahayd shariif sheikh oo jooga Kampala kama hadlo arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya xili sanad ka hor looga guulaystay doorashada madaxtinimo ee dalka
Puntland oo ka digtay in la soo celiyo hawadda Soomaaliya iyo khuburo ka hadashay (Dhegayso)
Ciidamada huwanta ah ee Dowladda iyo Ehellusuna iyo kuwa Jubba oo isku hor fadhiya Beled-xaawo